Amanqaku okwakhiwa kwezinto ezinokubanjelwa ebusika
ngomphathi ku 21-02-08
Kutshanje, iqondo lobushushu liyehla kwaye lehla, ke ulwakhiwo oluninzi luyakuchaphazeleka, ikakhulu kwimilo yezinto ezilahlwayo ezinqabileyo. Apha, iTowerower ibonelela ngeengcebiso malunga nolwakhiwo lwasebusika olwenziwe ngokwezixhobo. Ezifana nodaka lwealuminium acid, ityiwa, Portland ce ...
Itowerhouse 2021 Xiamen Expension Tour
Olu hambo lokwandiswa kwenkampani lwafika eXiamen entle, sayiva inzondelelo yabantu bendawo kunye nembonakalo entle. Ngalo msebenzi wokwakha iqela, ndaziva ngokunzulu amandla eqela, ukomelela komanyano, kunye namandla elungu ngalinye lempumelelo ...
Unyaka odlulileyo u-2020 ngokuqinisekileyo uya kushiya uphawu olomeleleyo kwimbali yoluntu. Oku kuqhambuka kuvavanye wonke umntu ehlabathini. Ivavanye bonke abasebenzi bethu kwaTopower. Lo bhubhani usinike ithuba lokunikela ngezinto zonyango ukusuka phesheya ukuya ...